Emva kukaThijs H., ibhilidi ye-Edith Schipper yokugcinwa kokugcinwa kokugcinwa, egcinwe kwikhabhinethi yangaphambili, iya kwamkelwa ngumntu wonke: uMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	9 Meyi 2019	• 9 Comments
Abantu babengakalungi. Omnye isikhalazo esivela kule sayithi waphumelela ngaphezu kwe-5 000 isayinwe kwi-bill ye-Edith Schippers kwibhaninethi yaseRutte yangaphambili. Isishwankathelo, loo ntlawulo ibonisa ukuba ngabahlobo bakho, abamelwane okanye intsapho ngqondweni kufuneka ufonele ukuqinisekisa ukuba unokuphonswa kwisitoreli esisodwa ekuboneni. Ungayifunda kwakhona ngaphantsi. Emva kokubulawa kukaThijs H. (apho thina kuphela i-1 ubungqina kunye nezibuko zelanga kumabonakude, kunye noThijs H. obenokuphila kwiiveki ezingaphantsi kweebini kwaye ngubani owambamba ukukhaba emnyango weshawo) kubantu abaye bavumela izinja zabo ukuba ziphume, wonke umntu uya kufumana le mithetho.
Yayiyintoni elo bhili ngoko? Jonga:
"Kulungile, kuba asifuni ukuba lolu hlobo lokubulala ngeentlobo ezifana noThjs H. kwaye wonke umntu ukhumbula u-Anne Faber (kwaye angakulibali ukubulawa kweBelgium uJulie van Espen)". Musa ukukholwa uMartin Vrijland ngokukodwa. Lo mcabango onobuqhetseba uzama ukukuqinisekisa ukuba ungadlala ne PsyOps (imisebenzi yengqondo) ngokusebenzisa Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo umgangatho. Oku kuthetha kakhulu ukuba uthengisa ingxaki (egxininisiweyo) yempembelelo enkulu yentlalo ngeendaba. Kule nto, ukusetyenziswa kungenziwa kwinqanaba lezinto zombini kunye ne-compromised people, kodwa kwakhona (kwaye mhlawumbi ngokukodwa) abalinganiswa bendawo abunobumba abadalwa (kubandakanywa ubungqina bevidiyo).
Bambalwa baya kukhathalela ukuba umthetho we-TBS uhlonyelwe emva kwecala lika-Anne Faber; de sibe saqonda ukuba sinamkele into efana noko kwenzekayo kunye nabaphikisana phantsi kweSoviet Union; abachasene nolawulo oluye lwasuswa kwi-gulag. Ngoku awukwazi ukuchasene nolawulo, kodwa jonga ulinde uze ungavumelani nomzali othile okanye (kungekudala) imiba enyanzelisayo njengogonyo.
Ukusola kwam kukuba le Thijs H. ibangele abantu Ingxaki, Ukuphendula, Isisombululo Umgangatho kufuneka ulungiselele ukwamukelwa komthetho ongenakunikwa umthetho we-Edith Schippers. Ukukhankanywa kukuba uTejs uphathwe kwiiklinikhi yeGGZ. Phawula am amazwi ukuba emva kwalokhu kufunyaniswa ukuba ukuba ngaba mmelwane okanye abaqhelana nabo babenokuthiwa yi-psychulance, konke oku kunokuthintela. Kuba oko kufuneka silinde ezimbalwa i-Nieuwsuur, i-DWDD, i-Pauw kunye ne-Jinek iingxoxo kunye nabantu baye balethwa kwimodi yokwamkelwa 'ngeengcali'. Akufanele uhlale ukhumbule ukuba lo mthetho ungathintela wonk 'ubani kwakhona kwaye iinkonzo zengqondo ziyakwazi ukuqhuba abantu abaninzi kwi-gulag (ngaphandle kokungenelela kwejaji okanye ingqondo). Unokwenza oko kungcono xa kusondele kakhulu. I ngikazi sele sele uqeqesho. Hayi kakuhle, mhlawumbi hayi ngumhlali.
Uludwe lwekhonkco lovimba: nos.nl
tags: Edith, eziziimbalasane, GGZ, H. ukubulala, izinja, klinikhi, umbulali, entsha, inkinga, ngqondweni, asabela, Schippers, isisombululo, Thijs, bahamba, emanzi, mithetho, mthetho
9 Meyi 2019 kwi-21: 23
Ewe, ke uPetros R de Vries ulungile, De Dwangbuis: uyakhumbula
Ngaba unombono ohlukileyo ??? : "Emva koko unokutshatyalaliswa kwi-straitjacket"
Ngoku wonke umntu uyazi ukuba uWim Dankbaar kufuneka agcine indaba ye-Vaatstra (ngokwenene i-Psyopp), kodwa wenza kunye noPeter ukuba anike ukuhamba.
Ngenxa yokuba iWim yayiza kuba neentloni ukuba loo nto yayingekho "ps".
Kwaye oko akunakubizwa ngokuba yi-susceptible, nokuba i-wimmetje ayilungile okanye ayikho
9 Meyi 2019 kwi-22: 14
"Abongikazi sele sele beqeqeshelwa."
Haha, i-hilarious. Iziqephu ze-puzzle ziwa kunye kakuhle.
10 Meyi 2019 kwi-06: 55
Ufuna ngokucacileyo uluhlu lweenkampani kunye nenkohliso ukuba isebenze ne-push push towards Edith Schippers?
10 Meyi 2019 kwi-19: 17
Thijs ... ngokuzithandela uhamba ewadi evaliweyo kwaye uzama ukubaleka emva koko?
10 Meyi 2019 kwi-21: 19
Oku kwangoko kwandibetha, xa uqonda indlela esebenza ngayo, kuyacaca ukuba kudlalwa njani.
Kwakhona uvakalelwa kukuba into ephosakeleyo ngoluhlobo lweendaba, ukuba uhlala uphapheme.
Kwakhona kubonakala ngathi abazami ukwenza ukuba kulungile.
Njengokuba bazama ukudala umfanekiso okhoyo ababulali ababulala iindawo ezinqabileyo kuyo ... ngubani obulala abantu ngokufanelekileyo ...
11 Meyi 2019 kwi-08: 19
I-Newspaper ye-Confused Netherlands
11 Meyi 2019 kwi-11: 48
Kwaye sitsho nje kwaye siqhubeke, ukuze umthetho ka-Edith Schipper ufezekiswe
11 Meyi 2019 kwi-11: 56
Kwaye sinika i-sauce eyongezelelweyo, ukuze imali eninzi ingatyaliswa kwi-gulag:
11 Meyi 2019 kwi-19: 40
Yenza nje, ngoko uya kudideka ngokwaneleyo.
Iingcamango, abagxeki, abangaphandle kwebhokisi bacinga ngokukhawuleza udidekile namhlanje.
Nceda ilizwe lonke likhukhulelwe ngamacandelo okudlwengula / ababulali, ii-psychopaths kunye namaphekula! Kwiminyaka yakutshanje, ininzi ishintshile eNetherlands, okanye ukukhanya kwakungekho kulo. Yintoni esihlala kuyo kwilizwe eliyingozi? Naliphi na ixesha into into eyenzekayo. Kodwa kungekhona kwi-gaypride okanye ngosuku lokumkani ngoko kukho okungafaniyo, kwanokuba ababulali, abaphangi njl. Bayavuya kwaye bavuya ngokukhawuleza.
« Umgangatho wokukhusela kwinqanaba elilandelayo: uPatrick Savalle uhambo lweqhinga ngeCafé Weltschmerz (iipateni zokukopela)
Ixesha lokucima le website? QAPHELA 15-05-2019 »
Iindwendwe ezipheleleyo: 13.948.417
Kutheni ufuna ukwazi oku? op Umngxunya omnyama othwethwe yi-NASA ngokwenene yiplasma yeplasma
Ikhamera 2 op Yintoni kanye le ngxaki yeNitrogen, kutheni amafama ekhalaza kwaye kutheni kuncitshiswa isantya?